Raw Stanozolol (Winstrol) poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekita
Raw Stanozolol (Winstrol) powder (10418-03-8) chirwere chakakwana kune avo vanoda kuwana zvakaoma uye zvakaonda misumbu. Mushonga wacho unowanzoitwa nemuromo mukucheka mitsara kubatsira vashandi kurasika kana kupisa mafuta emuviri.
Raw Stanozolol (Winstrol) powder (10418-03-8) Tsanangudzo
Raw Stanozolol powder is steroid anabolic inoshandiswa kuti iome uye yakaoma, inonyanya kushandiswa seinzwi panguva yekucheka maitiro kukanganisa mafuta. Izvozvo zvakasiyana-siyana zveDihydrotestosterone (DHT), saka unogona kutarisira kufanana kwemafuta kurasikirwa sezvaungaita nedzimwewo DHT yakagadzirwa steroid. Kune vakawanda vashandisi, ndiyo imwe nzira inodhura kuna vanavar, uye, chokwadi, yakawanda yakawanikwa pamusika. Pamusana pekushandurwa paA-ring, iyi i-steroid yakasiyana chaizvo, ine unhu hwakasiyana-siyana hwekucheka. Izvi zvinogadzira Raw winstrol powder pamusoro pe 3 kucheka steroid pamusika.
Raw Winstrol powder ane mano akasiyana-siyana ekuderedza huwandu hwehutachiona-kusunga globulin (SHBG), kupfuura imwe steroid chero ipi zvayo pamusika. SHBG inonzi hormone inosunga kune dzimwe steroid mukutenderera kwako zvichiita kuti isabatsire; mumashoko akajeka, zvinoita kuti kutora steroid yakawandisa isingabatsiri sezvo isingavatsigiri. Zvisinei, Raw stanozolol powder inokubvumira kuti uwane mazana akawanda steroid muhupenyu hwako pasina chidimbu chekuderedza deta yako. Chinhu chinonakidza chinenge chiri Raw winstrol powder uye proviron, zvichibvumira kuti SHBG iwedzere kugadziriswa uye kuwedzere kubudirira kwehupenyu.
Kemikari Name Winstrol, winny
muchiso Name zhinji
Molecular Wsere 328.49
Kunyorera Point 242 ° C
Biological Half-Life Oral: 9 maawa; IM: 24 maawa (aq. Susp.)
Skukodzera Chengetedzeka mumvura (1 mg / mL). Sorouble mu ethanol (24 mg / mL).
APane Steroid yakagadzirwa nevanhu, yakafanana nesterosterone inowanzoitika. Raw Stanozolol powder inoshandiswa pakuchengetedzwa kweanioedema yenhaka
Chii chinonzi Raw Stanozolol (Winstrol) powder (10418-03-8)?
Stanozolol (10418-03-8) inonzi hormone yavanabolic inowanikwa mune fomu yakarongeka ye dihydrotestosterone (DHT) fomu. Kuchinja kwemugadziri kunoitwa paDH hormone kuti kuderedze uyerogenicity iyo ichivandudza mazana e anabolic imvumo inobvumira vashandi kuwana mishonga yakaonda uye kusimbisa simba rose remuviri. Stanozolol inobva mune zvose zviri mumuromo uye injectable maitiro zvinoreva kana iwe usinganzwisisi nemajekiseni iwe unogona kuenda kumuromo. Mushonga unoitwa uye unotengeswa pasi pezita rinonzi Winstrol. Migumisiro yaro inoita kuti mishonga yacho ive yakarongeka pakati pevatatu vatatu vanozivikanwa steroid pakati pevarimi vemasikirwo nevatambi vechikoro. Dianabol ndiye steroid inotungamirira pakupa zvibereko zvakanaka, Deca-Durabolin achitora nzvimbo yechipiri ipapo Stanozolol kugadzirisa panzvimbo yechitatu.
Iyo Yakakura sei Stanozolol (Winstrol) powder (10418-03-8) mabasa
Stanozolol (10418-03-8) mishonga yakakwana yeavo vanoda kuwana miviri yakaoma uye yakaonda. Mushonga wacho unowanzoitwa nemuromo mukucheka mitsara kubatsira vashandi kurasika kana kupisa mafuta emuviri. Sezvambotaurwa kare mishonga inoshanda saizvozvowo kune dzimwe DHT inotora vanabolic steroid. Vatambi vakawanda vanofunga steroid iyi sechinhu chinodhura kuAnavar uyewo sekuwana nyore kugadziriswa kwemuviri pamusika. I-A-ring modification inoita kuti Winstrol ave steroid yakasiyana neyakanakisisa yekucheka kukwanisa. Kungofanana nehuwandu hweDTH inoshandiswa steroid, kana uchishandisa Stanozolol, haufaniri kunetseka nezvechirwere ichi chinoshandura muestrogen mushure mekunge ichipinda mumuviri wako. Panewo chimwe chiitiko chinonakidza cheStanozolo, icho vanhu vazhinji vanowanzotaura pamusoro pezvo, uye ndiko kukwanisa kwayo kugadzirisa lipoproteins yakakwirira-mashizha (HDL) uyewo kuwedzera huwandu hwepoprotein levels (LDL). Imwe yeiyo inokosha Winstrol inobatsira iyo vashandi vazhinji vanofarira panguva uye shure kwekupedzisa purogiramu. Zvisinei, HDL / LDL kusvika zvino haigoni kutsigirwa nesayenzi uye inotsigira pamishumo kubva kune uchapupu husina kuvimbika.
Chirwere cheStananoi chinorayirwa varume kubva ku40mgs kusvika ku100mgs pazuva asi vakadzi vanofanira kungotora pakati pe5mgs uye 15 mgs pazuva. Kune vakadzi vanoda kuda kutora mizinga yepamusoro, havafanire kuenda kumadarika 20mgs pazuva, uye ichi chiyero chinongokurudzirwa kumakwikwi evakadzi vemuviri kana kuti bodybuilders. Kutaura kuwedzerwa kuwedzerwa kwevakadzi kunogona kutungamirira kumigumisiro yakaipa yakadai sekukudzikisa hutundu hwakakura uye hunoonda semarume. Hapana mukadzi angada kuva nemurume-semuviri, uye ndiwo mukana wekutora steroid yakawandisa. Rega chiremba wako atungamirire iwe kuti ungatora sei chirwere ichi nenzira yakarurama kuti uwane mhinduro yakanaka iyo ichakubatsira kuti ubudirire mubasa rako. IWedstrol beginners inotanga kutanga nemadhora mashoma ayo chiremba anogona kugadzirisa gare gare mushure mekutarisa kufambira mberi. Kune avo vari muhare, mazinga anogona kushandisa zvakanyanya Winstrol dosji kana kutaura nachiremba kana vasina kuve nemigumisiro ipi zvayo.
Raw Stanozolol (Winstrol) powder (10418-03-8) zvinobatsira
Kuva wechitatu inonyanyozivikanwa nevanabolic steroid, Zvibereko zveStanzol zvinouya nezvipo zvakasiyana-siyana zvinoita kuti chiremba ave shamwari kune vamwe vatambi uye varimi. Sezvatakanga tataura kare, steroid yakatanga kushandiswa pakurapwa kwepamusoro pakudaro pakuchengetwa kwevana angioedema uye Osteoporosis. Mushure mekuziva kuti mishonga inogona kubatsirawo vatambi uye varimi vemuviri kuti vavandudze kushanda kwavo yakave yakakurumbira pakati pevatambi vechiremera. Stanozolol inopa zvipo zvakasiyana-siyana kuvashandisi vayo, uye ndeyotevera;
(1) Stanozolol haishanduki kuva isrogen, ruzhinji rwevanabolic steroid kana vopinda mumuviri vanokurumidza kuchinjira kuva estrogen. Zvisinei, Winstrol anosimba kuti ave pakati pevasholic steroid vashoma vasingashanduki mu estrogen. Estrogen ine zviremera zvakakomba mune varume saikukudzirwa kwezvipfuva zvevakadzi. Saka, iwe hauna chikonzero chokuzvidya mwoyo paunotora steroid inoshamisa.
(2) Inobvumira vashandisi kukudziridza mishonga yepamusoro, Winstrol anokwanisa kupa maitiro ekukura kwemasumbu kune vashandi angave chimwe chikonzero chinokosha nei vatambi vakawanda uye bodybuilders vachichifarira. Kusiyana nedzimwe vana vanabolic steroid iyo inongowedzera hukuru hwemasumbu, Stanozolol inowedzerawo simba remasimba. Kana kudya kwakakodzera uye kushanda kwakapedzana nekufamba, iwe unogona kukurumidza kusimbisa masimba, akasimba uye anhu hwakanaka. Kana iwe uchida kuvaka mishonga yako, ipapo Winstrol anoita sarudzo yakakwana kwauri.
(3) Steroid haina kukonzera kusachengetwa kwemvura kunoita kuti zvive zvakanaka kune vakawanda vanowedzera masimba. Kuwanda kweSteroid iripo pamusika nhasi kunotungamirira mukuchengetwa kwemvura mumisungo inoramba vashandisi kuti vasvike musimba uye akasimba. Sezvaunoramba uchifamba murwendo rwako rwekuvaka musimba, haufaniri kunetseka pamusoro pemvura chero ipi zvayo kana uchishandisa Stanozolol.
(4) Winstrol inopa vashandi vayo mukana wekusarudza kuti vangada sei kushandisa iyo sezvo iripo zvose zviri mumuromo uye zvisina kuiswa mafomu. Vanhu vazhinji vanotya majekiseni angangodaro nekuda kwemarwadzo, asi Stanozolol inokupa mukana wekunakidzwa nezvibatsiro usingatauri chero nheyo. Inonyorera inowanikwa mumapiritsi nemvura. Chiremba wako achakubvumira kuti usarudze maitiro ako aunoda maitiro. Kana iwe uchigadzirisa iyo injodzi Winstrol, iva nechokwadi chokuti mushonga kana mushandi anopa utano hwose. Usaita chikanganiso chokuzvivhara iwe kana iwe usati uri nyanzvi.
(5) Imwe rubatsiro inokosha iyo vashandi vanonakidzwa panguva uye mushure mokunge Stanozolol iri kutarisana nemigumisiro yakakurumidza. Steroid dzakawanda dzinotora nguva usati watora mushure mhinduro dzakakwana. Zvisinei, izvozvo hazviitiki kana iwe uri kutora Winstrol, nenguva yaunopedza mutambo wekutanga, iwe uchange uchiona uye uchiona zvabuda. Kusarudza kudya kwakakodzera pamwe chete nekufambidzana nekuita basa rakakodzera, iwe uchawana mhinduro mukati mechinguva chiduku. Tevera mirairo yose inorayirirwa uye ibatanidza chiremba wako muhutano hwose hwekuita nani uye nekukurumidza.
Tenga Stanozolol (Winstrol) powder kubva kuBuasas.com